ဗိုလ်လုပွဲတက်သွားတဲ့ စပိန် ၊ ယူရို သန်း ၉၀ ဈေးခေါ်လိုက်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ၊ ပြန်ကစားပြီး ဂိုးသွင်းတဲ့ ရက်ဖိုဒ့် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ဗိုလ်လုပွဲတက်သွားတဲ့ စပိန် ၊ ယူရို သန်း ၉၀ ဈေးခေါ်လိုက်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ၊ ပြန်ကစားပြီး ဂိုးသွင်းတဲ့ ရက်ဖိုဒ့် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
October 7, 2021 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ UEFA Nations League ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်မှာတော့ စပိန် အသင်းဟာ အီတလီ အသင်းကို ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ဗိုလ်လုပွဲကို တက်လှမ်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် အတွက် မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူးလေး ဖာရန် တောရက်စ် တဦးတည်း ၂ ဂိုး သွင်းယူ ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အီတလီ ဘက်က ပယ်လီဂရီနီ က ၁ ဂိုး ပြန်လည် သွင်းယူပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် ဟာ ဒီကနေ့မှာ ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဘယ်လ်ဂျီယံ နဲ့ ပြင်သစ်တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်က အနိုင် ရရှိလာမယ့် အသင်းနဲ့ ဖိုင်နယ် မှာ ရင်ဆိုင် ကစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
လီဗာပူး အသင်းဟာ တိုရီနို နောက်ခံလူ ဂလီဆင် ဘရီမာ ကို ပြန်လည် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိလာခဲ့တယ် လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ အိုလေဂန်နာ ဆိုးရှား ဟာ နယ်သာလန် ကွင်းလယ်လူ ဒွန်နီ ဗန်ဒီဘိ ကို ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာ အသင်းပြောင်းဖို့ ခွင့်ပြု သွားဖွယ် မရှိနိုင်ဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဗန်ဒီဘိ ဟာ ဒီရာသီမှာ ယူနိုက်တက် အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပွဲချိန် ၅ မိနစ်သာ ကစားထားရသေးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီရာသီမှာ နည်းပြ နူနို ရဲ့ အောက်မှာ ပွဲကစားခွင့် ဆုံးရှုံး နေတဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကွင်းလယ်လူ ဟယ်ရီဝင့် ဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ ကလပ် အသင်းကနေ အငှားနဲ့ ဖြစ်စေ ထွက်ခွာလိုတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိ ထားတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဒူဆန် ဗလာဟိုဗစ် အတွက် ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းဟာ ယူရို သန်း ၉၀ ဈေးသတ်မှတ် လိုက်တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဗလာဟိုဗစ် ဟာ ဇန်နဝါရီမှာ အသင်းကြီး တသင်းသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ နိုင်ချေ ရှိနေတာကြောင့် ဖီအိုရင်တီးနား ဟာ အစားထိုးမယ့် ကစားသမားတွေကို စတင် ရှာဖွေ နေပြီလို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
စပါး အသင်းရဲ့ အာဂျင်တီးနားသား တွေဖြစ်တဲ့ လိုကယ်ဆို ၊ ခရစ်ရှန် ရိုမဲရိုး နဲ့ ဗီလာ ဂိုးသမား မာတီနက် တို့ဟာ အာဂျင်တီးနား ရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ ၃ ပွဲ စလုံးမှာ အသင်းနဲ့ အတူ ရှိနေမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁၆-၁၇ မှာ ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ ကို သက်ဆိုင်ရာ ကလပ်တွေ နဲ့ ပါဝင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဝက်ဖိုဒ့် နည်းပြဟောင်း ကွီကွီး ဆန်ချက် ဖလော်ရက်စ် ဟာ လာလီဂါ ကလပ် ဂီတာဖေး အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် အဖြစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ အထိ စာချုပ်ချုပ်ဆို လိုက်ပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ယမန်နေ့က ဘလက်ဘန်း အသင်းနဲ့ အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာ တံခါးပိတ် ခြေစမ်းပွဲ ကစားခဲ့ပြီး ၃-၀ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အဆိုပါပွဲမှာ ပုခုံး ဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်မှုကနေ ပြန်လည် သက်သာလာတဲ့ မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ပါဝင် ကစား သွားခဲ့ပြီး ၂ ဂိုး သွင်းယူ ပေးခဲ့တယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်း ကို ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဆော်ဒီ အိမ်ရှေ့မင်းသား ဟာ အကြောင်းမျိုးစုံကြောင့် ၁၈ လ ကြာမြင့် ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ မိုက် အက်ရှ်လေ ထံကနေ နယူးကာဆယ် ကို အမှန်တကယ် ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အလွန် နီးစပ် လာခဲ့ပြီလို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။